Medical Writings ဆေးပညာစာများ: ရေနွေးညသိပ် မြွေအဆိပ်တဲ့
မမှန်တာ မဟုတ်တာ အတုဆိုရင် အတော်မေးကြတယ်။ ကြိမ်ဖန်များစွာမေးကြတယ်။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ ညသိပ်ရေနွေးကြမ်းဟာ ပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်ဖြစ်လို့ ညကျန်သောရေနွေးကြမ်းကို မသောက်သင့်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာခင်မျ ရိုသေစွာဖြင့် ဂါရဝပြုပါ၏။
၂။ ဆရာရှင် မသိလို့မေးပါရစေ။ တခါက စာထဲမှာ ဘတ်မိဘူးတယ်။ မည်သူ့အဆိုလဲတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ ညက လက်ဖက်ရေကြမ်းကို မသောက်သင့်ဘူးတဲ့။ မြွေဆိပ်လောက် အဆိပ်ရှိတယ်လို့တင်စား ဆိုမိန့်ထားတယ်။ နောက်ပြီး ညက ဓါတ်ဗူးထဲက ရေနွေးကိုလည်း မသုံးတင့်တော့ဘူးလဲ။ ကြးသိရတယ် အဲဒါဟုတ်ရဲ့လား။ ကျွန်မက ရေနွေးကြမ်း အမြဲသောက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ မှန် မမှန် သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူး အထူးတင်။
၃။ ညသိပ်ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင် အဆိပ်သောက်နေသလိုပဲတဲ့ ဖက်ဖူးတာပါ။
၄။ လက်ဖက်ရေကြမ်းက ၆ နာရီကျော်ကြာရင်အဆိပ်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာမှာ ဖတ်ဖူးတယ်ဆရာ။ ညသိပ်ရေနွေးကို မသောက်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။
၅။ ညသိပ်ရေနွေးအဆိပ်ပြင်းသည်လို့ ကြားဘူးပါသည်ဆရာ။
အဲလိုသာဆို ကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တပီပါ (တပေပါ) လောက် ရှိနေလောက်ပြီ။ ပီပါဆိုတာ ဟင်ဒီစကားဖြစ်တယ်။ ပီပါ ကိုင်းတပ်သောက်လို့ ပြောကြတယ်။
ညသိပ်ရေးနွေး ဆေးသုတေသန မတွေ့သေးပါ။ ကျွန်တော့်ကိုသာကြည့်ပါ။ အိန္ဒိယကမထွက်ခင် တကိုယ်လုံး ဆေးစစ်ရတယ်။ ယူအက်စ်ရောက်တော့လည်း ခြေစခေါင်းဆုံးဆေးစစ်တယ်။ အဆိပ်ဆိုတာ ခုထိတော့ မတွေ့သေးပါ။
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေက မပျောက်နိုင်တာတွေကို ၉၆ ပါးပျောက်သတဲ့။ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်တာကို အဆိပ်တဲ့။
မနက်ထတော့ ညကကျန်သေးတဲ့ရေနွေးကြမ်းကိုသောက်ပါတယ်။ ကုန်တော့ အသစ်ခပ်တယ်။ တနေ့ ၃ လီတာ နီးပါးကုန်တယ်။ အဲတာနေ့တိုင်းပါ။ ဆေးထပ်စစ်ရမလားမသိ။
မမှန်တာ မဟုတ်တာ အတုဆိုရင် အတော်မေးကြတယ်။ ကြိမ်ဖန်များစွာမေးကြတယ်။ ထပ်မေးကြဦးမှာသေချာတယ်။
Water Questions ရေနွေးကြမ်း ဘလာ ဘလာ ဘလာ
ရေနွေးညသိပ် မြွေအဆိပ်တဲ့ အောက်မှာ ကွန်မင့်တွေ အမျိုးမျိုးရေးလာကြတယ်။
• ဆူပြီးသားရေနွေး ပြန်ကြိုတာနှင့် ရေသန့်ကိုကြိုတာ မကောင်းဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျာ
• ဘယ်သုတေသနကို ကိုးကားထားပါလဲ။
• အိုဇုန်းလွှာကိုဖြတ်ထားပြီးသားရေသန့်ကို ရေနွေးပြန်မကြိုရဘူးလို့ ဖတ်ဘူးလို့ပါဆရာ။
• ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာ အိုဇုန်းနဲ့ လွတ်တာ မရှိပါ။ ရေသန့်ဆိုတာ အဲတာကိုပြောတာမဟုတ်။
• မကောင်းဘူးလေ အရသာလေ အရသာပဲ မကောင်းတာ
• ရေနွေးကြမ်းအရသာဆိုတာ လက်ဖက်ခြောက်အမျိုးအစားနဲ့ ရေအပေါ်မူတည်တယ်။ မသန့်လို့ပြောနိုင်တဲ့ မြစ်ရေဟာ ရေနွေးတည်သောက်ရင် အရသာကောင်းတယ်။ မိုးရေလည်းကောင်းတယ်။
• တိုင်းရင်းဆေးဆရာများသာသိနိုင်ပါတယ် ရေအမျိုးမျိုးမှာဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါတယ်
• တိုင်းရင်းဆေးဆရာမဟုတ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေက သောက်ရေသုံးရေအကြောင်း လူတွေအတွက် ကောင်းမကောင်းသိကြတယ်။ ရေအမျိုးမျိုးအကြောင်း အများကြီးရေးထားတယ်။
• အစာအိမ်ထဲမှာ အဆိပ်ဖြစ်ပြီး အော့အန်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• ကျွန်တော်တော့ ရေနွေးကြမ်းသောက်တာ နှစ်မနည်းတော့ပါ။ ရေနွေးကြမ်းသောက်ပြီးအန်တာ မဖြစ်ဖူးသေးပါ။
• ဓါတ်ဘူးထဲမှာ သုတ်လိမ်းထားတဲ့ ပြဒါးတွေဟာ ကြာရင် ပျက်ပြီး ကွက်မည်းလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
• ဓါတ်ဗူးဆိုတာ တခြားအရာတွေလိုပဲ အိုမင်းပျက်စီးခြင်းရှိတယ်။ အသုံးများခြင်းကြောင့် ပြဒါးသာမက အရာရာ ပျက်လာကြတယ်။ ပြဒါးဆိပ်သင့်ခြင်းစာ ရေးထားတယ်။ အဲတာက ရေနွေးကြမ်းနဲ့မဆိုင်ပါ။
ပြဒါးဆိပ်သင့်သူတွေမှာ အာရုံခံမှုအားနည်းလာမယ်။ အမြင်-အကြားနဲ့ စကားပြောတာတွေဖြစ်တယ်။ ထိန်းညှိပြီး လုပ်ရတာတွေမှာလည်း အားနည်းလာမယ်။ ထုံကျင်တာ၊ ယားယံတာ၊ ပူလောင်တာ၊ နာတာ၊ အင်းဆက်ကောင် ကိုက်ခံရသလိုနေတာတွေဖြစ်မယ်။ အရေပြားအရောင်ပြောင်းမယ်။ ပါးတွေ၊ လက်ထိပ်-ခြေထိပ်တွေ ပန်းရောင်သန်းလာမယ်။ ရောင်နေမယ်။ တံတွေးများမယ်။ ချွေးများမယ်။ သွေးတက်မယ်။ နှလုံးခုန်မြန်မယ်။ ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မယ်။ အိပ်မရဖြစ်မယ်။ စိတ်လှုတ်ရှားမှုထိခိုက်မယ်။
1. A glass of water ရေတစ်ဖန်ခွက်ဟာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/a-glass-of-water.html
2. Alkaline water အယ်လ်ကာလိုင်းရေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/alkaline-water.html
3. Aquatabs water purification tablets ရေသန့်ဆေးပြား http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/aquatabs-water-purification-tablets.html
4. Chindwin River and Mercury ချင်းတွင်းမြစ်ရေ ပြဒါးပါဝင်မှုများနေ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/chindwin-river-and-mercury.html
5. Detox Water လူကြီးမင်းကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေရှိနေသတဲ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/detox-water.html
6. Drinking water ရေကုသိုလ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/water-please.html
7. Earth Day and Water Day ကမ္ဘာ့မြေ ကမ္ဘာ့ရေ မြန်မာ့မြေ မြန်မာ့ရေ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/earth-day-and-water-day.html
8. Emergency Disinfection of Drinking Water အရေးပေါ်ရေသန့်နည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/emergency-disinfection-of-drinking-water.html
9. How much water ရေဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/how-much-water.html
10. Newborn baby and Water ကလေးကို ရေဘယ်တော့တိုက်မလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/newborn-baby-and-water.html
11. Pollution in Yangon, Myanmar မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန် ညစ်ညမ်းမှု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/pollution-in-yangon-myanmar.html
12. Rainwater မိုးချမ်းတပေါက် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/rainwater.htmlဒေါက်တာတင့်ဆွေ
13. The Rainwater မိုးရေ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/the-rainwater.html
14. Water and Energy 2014 ရေနှင့်စွမ်းအင် ၂ဝ၁၄ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/water-and-energy-2014.html
15. Water and pH ရေသန့်ဆိုတာ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/water-and-ph.html
16. Water breaks ရေသောက်ချိန် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/water-breaks.html
17. Water cooler ဝါတာကူလာ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/water-cooler.html
18. Water for babies ကလေးနဲ့ရေ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/water-for-babies.html
19. Water Please ရေလှူကြပါဗျာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/water-please.html
20. Water poisoning ရေအဆိပ်သင့်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/ter-poisoning.html
21. Water requirements ရေဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/water-requirements.html
22. Water, water everywhere and notadrop to drink စေတနာတစက် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/water-water-everywhere-and-not-drop-to.html
23. Waterborne Diseases ရေကတဆင့်ကူးစက်သည့်ရောဂါများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/waterborne-diseases.html
24. World Water Day ကမ္ဘာ့ရေနေ့ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/world-water-day.html
မနေ့က နိုင်ငံရေးအမြင်မတူကြတာလေး ရေးခဲ့တယ်။ ဒီတခါ လျှာ။
ကွန်မင့်တခုက ဟုတ်တယ်ဆရာ ရေသန့်နဲ့က ဘယ်လိုမှ သောက်မကောင်းပါ အဲ့ဒါပြောတာတဲ့။
ကျွန်တော်က ဒီနိုင်ငံရောက်တာ ၄ နှစ်ရှိပြီ။ ပိုက်ကရေကို ထမင်းစားပြီး တခွက်သောက်တယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေ ရေနွေးကြမ်းကို ရေသန့်နဲ့သာတည်တယ်။ တနေ့ ၃ လီတာနီးပါးကုန်တယ်။
လူမတူ အမြင် မတူ။ လျှာမတူ။
ရေနွေး ရေးရတာ တော်လောက်ပြီထင်တယ်။ တချို့ကွန်မင့်တွေက ပြန်ပြောရမှာ အားနာနေရတယ်။
လူဦးရေ သန်း ၅ဝ ကျော်ထဲက တယောက်ပြောရင် မှန်ရောလား။
မအိပ်မီနဲ့ အိပ်ရာထတာ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ။ ကျွန်တော်ဆို တခါတလေ ည ၂ နာရီလောက်မှသာ အိပ်ပြီး၊ မနက် ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီ၊ ၁ဝ နာရီလောက်ထတယ်။ တအိမ်တည်းနေသူတွေ အိပ်ချိန် ထချိန် မတူကြပါ။ လူကြီးမင်းကိုတော့ မသိ။
ဓါတ်ဗူးထဲကရေနွေး မအေးသေးရင် သောက်လို့ရပါသလားတဲ့။
ဓါတ်ဗူးက အစကတည်း မသန့်တာ မဟုတ်ရင်၊ သောက်မဲ့သူက အဲဒီလောက်အပူခံနိုင်ရင်၊ ဆရာဝန်က ရေမသောက်နဲ့လို့ တားခံထားရသူမဟုတ်ရင့့်
တော်လောက်ပြီထင်တယ်။ တကယ်နေမကောင်းလို့မေးတာတွေ ဖြေရဦးမယ်။ အရေးပါတယ်ထင်တာလေးတွေ ရေးရဦးမယ်။ ရေနွေးကြမ်း ဒုတိယဓါတ်ဗူးကုန်ပြီ။ တတိယကိုတော့ ကနေ့ည မကုန်လောက်။ နောက်နေ့မနက် ဆက်သောက်မယ်။ ရေနှမြောလို့။ ကျွန်တော်က စာအုပ်ဟောင်းတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဟောင်းတွေလည်း တန်ဖိုးထားတယ်။ သိုးတယ်မရှိ။